Makumbo ako akawirwa here? Heano chikafu chinogadziriswa kuti chibatsire kubvisa "mitsipa yakakura"! - TELES RELAY
HOME » MY HEALTH Makumbo ako akapera here? Heano chikafu chinogadziriswa kuti chibatsire kubvisa "mitsipa yakakura"!
Parsley haisi chete mavitamini A, B, C uye K asiwo emaminera uye potassium. Iyi miriwo mishoma ine mishonga yakawanda.
Inogona kusimbisa simba rako rekudzivirira muviri uye rinorwisa dzimwe zvirwere uye zvirwere.
Imwe rubatsiro yemurimi uyu ndeyekuti ine eugenol, iyo inobatsira kuderedza marwadzo uye kuzvimba. Hungu hungu! Parsley inorwisa kupisa-kupisa zvinokubatsira kupedza mvura yekuchengetedza uye saka kubvisa marumbo akadzikira.
Nzira yekuita tei neparsley
Hezvino zvakanakisisa neparsley! Sezvo inobatsira kuderedza kuzvimba, iwe unogona kungozvinwa sechikamu.
Parsley inorwisa simba remhuka inogona kukubatsira kubvisa mvura yakawanda uye munyu mumuviri wako. Mukuwedzera, iyi miriwo inobata zvakasikwa zve potassium zvinoita kuti zvive zvakanyanya kupfurikidza neyemakemikari diuretics.
Dzimwe diuretics dzinokubvumira kubvisa mvura yakawandisa nemunyu, asi vanodzinga potassium kubva mumuviri wenyu; iyo inogona kuva nemigumisiro inotyisa.
Kana iwe uri nepamuviri, iwe hauri kurayirwa kushandisa sora iyi. Mukuwedzera, vanhu vanotora anticoagulants vanofanira kungwarira neiyi nokuti inowedzera mavhitamini K.
wedura parsley itsva;
dururira mvura inopisa mumukombe;
wedzera 1 / 4 parsley akaiswa mukombe rine mvura;
regai kumirira maminitsi 5;
mushure meizvi, shingai parsley uye munwe chai.
Pane nyore, kwete? Iwe unogonawo kuwedzera kapuni yeuchi kana uchida.
Iwe unoda kuva nebindu reparsley? Heano mamwe mazano
Zvakanakire kudyara parsley mukati megore.
Zvose zvaunoda ndeyokuwana nzvimbo ine zuva shoma mumunda wako. Tarisa kuti nyika inobereka uye usakanganwa kuva nemvura nguva dzose. Iwe unofanirwawo kusunga bindu rako kamwechete kwechinguva.
Iwe unogona kunge uchidyara mbeu dzako uye uzviisire mukati mukati mavhiki e6 usati wagona kuzviendesa kuhari. Mbeu dzeParsley dzinotora nguva yakareba kuti dzibude, ndicho chikonzero zvakakosha kutanga kuvadyara mumba.
Tinovimba kuti wakawana mazano aya anobatsira. Zvichida iwe uchakwanisa kubatsira mumwe munhu ane dambudziko nemakumbo akadzora. Usakanganwa kutaurirana nachiremba kana kupfuurira kuchiramba kwenguva refu.
Ichi chinyorwa chinopiwa nekuda kwechinangwa chete. Mimwe michina nezvinhu zvakataurwa munyaya ino zvinogona kuita kuti zvirwere zviitike uye zvinokanganisa utano hwako. Usati washandisa, tsvaga unyanzvi akadzidziswa / nyanzvi. Bhuku reHurumende harifaniri kutongerwa mhosva yekusarura chero kupi zvako kana zvimwe zvinoguma zvingaguma nekushandisa nzira, zvigadzirwa kana zvinhu zvinotsanangurwa munyaya ino.
Chirwere chemaitiro chakazivikanwa chakange chisina kuveura kwegore kuitira kutsigira "runako rwepanyama"!